Maamulka Dekadda Muqdisho oo si kulul u beeniyay wararka sheegaya in Sokor… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 9 February 2019
Maamulka Dekedda Muqdisho oo ka hadlay Markab shixnad Sonkor waday oo dhawaan ku soo xirtay Dekedda.
Madaxda Dekedda iyo Ganacstadda uu u raran yahay Markabkaasi waxay sheegeen inuu Dekedda Muqdisho ku soo xirtay Markab weyn oo ay saaran tahay 40,000 oo Tan oo Sonkor Nadiif ah.
Madaxda Dekedda Mudqisho iyo Saraakiisha Qeybta qaabilsan Kontoroolka Tayada badeecadaha ee Dekeddaasi oo la hadlay Warbaahinta waxay si kulul u beeniyeen warar ay qaar ka mid ah Websaytyadda soo daabaceen, kuna sheegeen in Markab wada Sonkor xumaatay ku soo xirtay Dekedda Weyn ee magaalladda Muqdisho.
Madaxdaasi waxay xuseen inay Sonkortaasi oo Tayo wanaagsan leh, laga keenay dalalka Khaliijka, isla markaana ay tahay Badeecad la hubiyey, oo waafaqsan Nidaamka Caalamiga ee Tayada Sonkorta.
Madaxdu waxay Warbaahinta la wadaageen inaysan faraha la gelin karin Khilaafka iyo Loolanka Ganacsi ee u dhexeeya Ganacsatadda Shixnadaha Sonkorta ka soo degsada Dekeddaha waa weyn ee dalkeenna, gaar ahaan Dekedda weyn ee Muqdisho, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kale, Wasaarada Ganacsiga iyo Wershadaha ee Xukuumadda Federalka ayaa sheegtay in tayada badeecadaas la hubiyey
Si kastaba ha ahaatee, mar aan booqanay Dekedda Muqdisho waxay Hawlwadeennadda inoo sheegeen in Markab kale oo shixnad sonkor ku raran tahay uu taagan yahay Badda meel ka baxsan Dekedda Muqdisho.
Beenin: Ganacsato Soomaali oo fadhigoodu yahay dalka Kenya oo ka hadlay Markab u waday Sonkor oo ku soo xirtay Dekedda Muqdisho.
Qaar ka mid ah Ganacsataddaasi oo la hadlay qeybo ka mid ah Warbaahinadda Madaxa Bannaan ee dalka ayaa sheegay inay Markabkooda oo ku xirnaa Dekedda Mombasa ee dalka Kenya u soo weeciyeen Dekedda Muqdisho, kadib, markii ay xamili waayeen Canshuur xad-dhaaf ah oo ay Madaxda dekedda Mombasa ku soo rogeen.
Ganacsatada waxay sheegeen in Markabkaasi uu wado shixnad sonkor oo 40,000 oo tan ah , taasi oo ay dabayaaqadii sannadkii hore ka keeneen dalka Imaaraadka Carabta.
Ganacsatadda uu u rarnaa Markabkaasi oo Xarumo Ganacsi oo caan ah ku leh dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi, waxay leeyihiin Laysimada Ganacsiga ee soo-dejinta iyo dhoofinta Badeecadaha Quutal-daruuriga ee dalkaasi.